Changyuan Aluminum has two workshop for anodizing and electrophoresis. Anodizing လူမီနီယံပရိုဖိုင်းကိုအလွှာတစ်ခု anode အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်ဖြစ်ပါတယ်, နှင့် electrolysis တစ်ခု electrolytic ဖြေရှင်းချက်ထဲမှာဖျော်ဖြေခဲ့သည်, andaprotective oxide film was artificially formed on the surface of the substrate to form an alumina material. Alumina material main features:1. It has strong abrasion resistance, weather resistance and corrosion resistance.
အီးမေးလ်ပို့ပါ ယခုဆက်သွယ်ပါ PDF အနေဖြင့်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ
Changyuan Aluminum has two workshop for anodizing and electrophoresis. Anodizing လူမီနီယံပရိုဖိုင်းကိုအလွှာတစ်ခု anode အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်ဖြစ်ပါတယ်, နှင့် electrolysis တစ်ခု electrolytic ဖြေရှင်းချက်ထဲမှာဖျော်ဖြေခဲ့သည်, andaprotective oxide film was artificially formed on the surface of the substrate to form an alumina material. Alumina material main features:1. It has strong abrasion resistance, weather resistance and corrosion resistance. 2. Various colors can be formed on the surface of the substrate, which can best meet your requirements. 3. Strong hardness, suitable for the production of various construction and industrial materials. Anodizing of aluminum profiles is actuallyamethod of surface treatment of aluminum profiles. It is to form an oxide film on the surface of the aluminum profile, which is elegant and beautiful and resistant to corrosion. Generally, the anodizing treatment of aluminum profiles is silver-white oxidation treatment, and the surface of aluminum profiles is silver-white, but the aluminum-treated aluminum profiles are also black, yellow, နှင့်အခြားလူမီနီယံ profile များကို. These are completed during the anodizing process.
1 လုပ်ငန်းအမျိုးအစား ထုတ်လုပ်သူ
2 စံ: GB 5237-2008; EN755, စသည်တို့,
3 ထုတ်ကုန်စီးရီး: ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများနှင့်စက်မှုပစ္စည်းများအတွက်လူမီနီယမ်ပရိုဖိုင်းကို.
4 စျေးနှုန်း: Nanhai Aluminum Ingot စျေးနှုန်းအပေါ်အခြေခံသည်(http://www.lvdingjia.com/) + ပြုပြင်ခ
5 ငွေပေးချေမှုသက်တမ်း: T / T, မျက်မှောက်မှာ L / C
6 မျက်နှာပြင်ကုသမှု: ကြိတ်စက်ပြီးပြီ, ကဗျာ, အမှုန့်အပေါ်ယံပိုင်း, Electrophoresis, သစ်သား finish ကို, အပူစော်ကားမှု
7 အလွိုင်း: 6063
8 ပြည်နယ်: T4 / T5 / T6
9 အရှည် 1m-7m, ကွန်တိန်နာများအတွက်ယေဘုယျအားဖြင့် 5.85m
10 ပုံမှန် Anodizing အထူ: ပျမ်းမျှ >10 မိုက်ခရို,
11 ပုံမှန်အမှုန့်အပေါ်ယံပိုင်းအထူ: >40မိုက်ခရို
12 အထူ: 0.4မီလီမီတာ 0.5mm 0.6mm,0.8မီလီမီတာ,1.0မီလီမီတာ,1.2မီလီမီတာ,1.4မီလီမီတာ,2.0မီလီမီတာ,3.0မီလီမီတာ,4.0မီလီမီတာစသည်တို့ကို.
13 စျေးနှုန်း NH / LME မူလ ingot စျေးနှုန်း + အများဆုံးအပြိုင်အဆိုင်ပြောင်းလဲခြင်းကုန်ကျစရိတ်
14 မှိုမူဝါဒ ဝယ်ယူလိုက်သောပစ္စည်းတစ်ခုစီသည် volume ကိုရယူပါ 1 တန်ချိန်, မှိုငွေပေးချေမှုပြန်အမ်း
15 ပေးပို့အချိန်ဇယား အတွင်း 20 အမိန့်အချိန်ကနေရက်ပေါင်း
16 ငွေပေးချေမှုသက်တမ်း 30% အပ်ငွေ, အတွင်း B / L ကိုမိတ္တူဆန့်ကျင်လက်ကျန်ငွေပေးချေမှု7ရက်ပေါင်း
17 ထုပ်ပိုးစံ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးရုပ်ရှင်ကားအတွင်းပိုင်း, ကျုံ့ရုပ်ရှင်သို့မဟုတ်အထူစက္ကူအပြင်ဘက်တွင်
18 လက်မှတ် SGS / TUV - ISO9001:2008 - ISO14001:2004 CE RoHS
19 အသုံးပြုမှု လျှော, ကာရာအိုကေ, ပြတင်းပေါက်, တံခါးများ, ကုလားကာနံရံ, စက်မှုလုပ်ငန်း, အလှဆင်အမိုးမိုး, ခြံစည်းရိုး, ကွမ်းခြံကုန်း
20 OEM စိတ်ကြိုက်လူမီနီယံ profile များကိုရရှိနိုင်ပါသည်
Benefit အိုf anodizing aluminum profile:
CE အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်, SGS, ISO9001, ISO14001 နှင့် RoHS authentication ကို
ရှေ့ပြေးပုံစံထုတ်ကုန်အားလုံးဖြတ်သန်းရမည်4လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးအတွက်စစ်ဆေးမှုများ:
Building materials, industrial use, ပြတင်းပေါက်, တံခါးကို, heat sink, desk, chair..
3). ကျော်လွန် 400 worker in our factory
4) ကဗျာ, electrophoresis နှင့်အမှုန့်အပေါ်ယံပိုင်းအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ.
အမှတ်အသားများ (Tags)：aluminium extrusion manufacturer, လူမီနီယမ် extrusion ပရိုဖိုင်း, aluminium profile with anodizing, aluminium profile with anodizing Manufacturer, လူမီနီယံပရိုဖိုင်းကို, Anodizing for aluminium profiles, စက်မှုအလူမီနီယံပရိုဖိုင်းကို